Samachar Batika || News from Nepal » आज २०७७ वैशाख २४ गते बुधबारको- राशिफल
आज २०७७ वैशाख २४ गते बुधबारको- राशिफल
आज २०७७ वैशाख २४ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? हेरौ आजको राशिफल:
नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्दा उत्तम देखिन्छ । मन प्रफूल्लित रहनेछ । श’त्रु सक्रिय हुनेछन्, आफन्तबाटै पनि जोगिनुपर्ने देखिन्छ । पारिवारिक क’लहको सम्भावना, पति–पत्नीबीच वि’वाद होला ।
धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला ।प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ । मु’द्दा मा’मिला तपाईको पक्षमा हुनेछन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ ।
अध्ययनमा सुधार, आर्थिक लाभको सम्भावना । घरायासी क’लह बढ्ने योग छ । चो’टपटक लाग्न सक्छ । वा’दविवाद हुने सम्भवाना छ । आ’लोचना गर्नेहरु प्रशस्त हुनेछन् । मनमा अ’शान्ति छाउन सक्छ ।
स्वास्थयमा समस्या देखिन सक्छ । वैदेशिक यात्राको योग छ । व्यापारमा हा’नी हुने योग छ । राजनीतिमा शुभ देखिन्छ । सामाजिक कार्यबाट लाभ मिल्नेछ । आकस्मिक धनमालको लाभ हुने योग छ ।
बोलीको प्रभाव बढ्ला । जागिरमा पदोन्नतिको हुने सम्भावना छ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक लाभको सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजन हुनेछ । वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
अध्ययनमा बा’धा आउँला । श’त्रुहरुसँग टाढै रहनु उत्तम देखिन्छ ।जागिरमा पदोन्नतति होला । व्यापारमा फाइदा हुने देखिन्छ । प्रेम सफल हुनेछ । आफन्तहरुसँगको भेटघाटले मन प्रफूल्लित होला ।
अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। मेहनतले प्र’तिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। दिउँसोदेखि रमाइलो जमघटमा सहभागी भइनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुनेछ। लोकाचारले फजुल खर्च गराए पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ।
अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा पछि परिनेछ। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ।
आफन्त र परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने हुन सक्छ। साझेदारसँग अ’समझदारी देखिने हुँदा सजग रहनुहोला। ह’डबडीले समस्या नि’म्त्याउन सक्छ। आश्वासन दिनेहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन्। ह’ल्लाको विश्वास गर्दा धो’का पाइनेछ।
उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। प्र’तिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। दिउँसोदेखि साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बे’सुरमा काम गर्दा दु:ख पाइनेछ।
बे’सुरमा बोल्ने बानीले वा’दविवाद निम्त्याउन सक्छ। परिस्थितिको ब’न्धनले पनि स्वतन्त्रतामा बा’धा पुर्याउला। दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर भइनेछ। व्यापार बढ्नाले लाभ हुनेछ।
कमजोरी सुधार गर्दै फाइदा उठाउने समय छ। बि’छोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। अवसर प्राप्त भए पनि भू’लवश काममा बा’धा होला। दिउँसोदेखि आफ्ना कमजोरीमाथि टि’प्पणी हुन सक्छ।
प्रकाशित मिति २४ बैशाख २०७७, बुधबार ००:२५